Kenya: Doorashada ku-celiska ah oo socota iyo rabshado dhacaya – Kasmo Newspaper
Kenya: Doorashada ku-celiska ah oo socota iyo rabshado dhacaya
Updated - October 26, 2017 1:28 pm GMT
London (Kasmo), Booliska Kenya ayaa kala eryay dad mucaaradka ka soo jeeda oo dibadbax ka dhigaya xaafadda Isku-raranka ah, Kibera, ee Nairobi, iyaga oo ku riday Gaaska ilmada keena, sida ay sheegayso warbaahinta Caalamiga ah, saacado yar ka dib markii la furay sanaatiikhdii codbixinta.
Magaalada mucaaradku ku badanyahay, Kisumu, ee galbeedka dalka, 1 qof ayaa ku dhintay, 3 kalena waa ku dhaawacmeen iska horimaad Boliiska iyo dibadbaxayaasha dhexmaray.
Codeyntu waxay soo xirmi doontaa 5ta galabnimo xilliga Kenya, laakiin arrinka qur ah ee isha lagu hayo waa tirada dadka ka qaybgalaya oo ka dhigi doona natiijada mid sharci ah.
Ka soo qaybgalkii Agosto wuxuu ahaa 75,5%, waxaana codkooda dhiibtay 19,6 malyuun oo muwaadiniin ah.
Sanaatiikhda qaarkood ee goobaha mucaaradku ka taliyo lama furin, iyaga oo ka jawaabaya baaqii hoggoomiyahooda Raila Odinga oo ahaa in la qaaddaco doorashada.
Codbixintuse waxay si habsami leh uga socotaa goobaha laga taageesanyahay Madaxweyne Uhuru Kenyatta, in kasta oo tirada dadka ka qaybgalaya la sheegay in ay ka hooseyso middii 8dii Agosto.
Magaalada Gatundu ee Kenyatta ka soo jeedo, roobab lixaad leh waxay jareen ilayskii oo khasab ka dhigtay in tooshah la isticmaalo, si loo diyaariyo dokumentiga cadceedda ka hor.
Doorashadaan ayaa markii 2aad loo dareerayaa iyada oo middii 8dii Agosto oo uu ku guulaystay Madaxweynaha xilka bannaynaya, Uhuru Kenyatta, muran iyo khilaaf mucaaradku keeneen darteed Maxkamadda Sare u nasakhday.
Dad badan waxay is weydiinayaan waxa dhici doona marka natiijada la sugayo soo baxdo, taas oo la filayo in uu ku soo bixi doono Madaxweynaha xilka bannaynaya, Uhuru Kenyatta oo taageerayaasha ugu badan haysta.